Ajụjụ asaa ị ga-ajụ ndị ọrụ gị tupu ị banye | Martech Zone
Anyị hụrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'anya. Ihe omuma anyi na njikarịcha njin ọchụchọ na usoro ọdịnaya abụrụla ihe enyemaka maka ndị mmekọ anyị niile na anyị na-aga n'ihu na-eto akụkụ ahụ nke azụmahịa anyị. Anyị na-arụ ọrụ na ọtụtụ nnukwu mmepe, imewe na mmekọrịta ọha na eze na ihe anyị na ha niile nwere bụ ịchụso nsonaazụ azụmahịa.
Na-enweghị nsonaazụ azụmahịa, ụlọ ọrụ gị enweghị nsogbu. Ebe kachasị nke na - enweghị ike ịtụgharị abaghị uru. Ebe mara mma nke na-enweghị ike ịchọta abaghị uru. Nyocha, imewe na ide ị na-akwụ ụgwọ dị ukwuu maka nke ị na-enweghị ike ịghaghachi abaghị uru (karịa akwụkwọ izizi).
Anyị na-nọgidere na-eju anya na ọnụ ọgụgụ nke ndị ahịa na-abịakwute anyị na-emefu fọrọ nke nta niile ha mmefu ego ma na-adịghị ifiọkde utịp. Ihe anyị na-atụ anya ya bụ iwere ego ọ bụla fọdụụrụ anyị wee gbaa mbọ nweta ya. Mgbe ụfọdụ, anyị enweghị ike ime ka ọ rụọ ọrụ.
Ọ bụ ya mere ụdị azụmaahịa anyị ji dịtụ iche na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị na-akwụ ụgwọ ntinye ego ewepụghị ego wee rụpụta nsonaazụ. Imirikiti ndị ahịa anyị na-emefu ego nke otu onye ọrụ, mana ka ndị otu anyị na ndị mmekọ anyị niile na-arụ ọrụ iji hụ na a rụpụtara nsonaazụ azụmaahịa.
Tupu ị banye ụlọ ọrụ gị na ụlọ ọrụ gị ọzọ, anyị ga-agba gị ume ịjụ ajụjụ ndị a:
Kedu ndị ahịa ndị ọzọ ha na ụlọ ọrụ gị rụkọrọ ọrụ? I nwere ike iche na m na-ajụ maka esemokwu nwere ike ibilite, mana nke ahụ abụghị naanị ihe kpatara ya. Nke anyi gị n'ụlọnga na-aga n'ihu na-enwe ọganiihu dị egwu na ụlọ ọrụ metụtara azụmaahịa azụmaahịa mana anyị ejiri ụfọdụ ụlọ ọrụ ngwaahịa B2C daa. N'ihi nke a, anyị na-elekwasị anya n'otu akụkụ na onye ọ bụla chọrọ iso anyị rụọ ọrụ na mpụga akụkụ ahụ maara nke ọma iji hụ na anyị nwere ike imezu atụmanya ha.
Kedu onye nwere faịlụ iyi? Nke a bụkarị nsogbu kasịnụ anyị na-abanye na ya. Lọ ọrụ ahụ ga-emepụta ihe ọ bụla ịchọrọ mana ha na-ejigide ikike na njikwa nke faịlụ faịlụ niile. Want chọrọ imegharị ọrụ ahụ? Have ga-ajụ gị n'ụlọnga. Chọrọ ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ? Mgbe ahụ ị ga-ebido ọzọ. Nnọọ iwe. Ijide njide nke onye ahịa gị abụghị otu ị si azụlite azụmaahịa gị.
Kedu ihe na-eme mgbe ọ naghị arụ ọrụ? Agencylọ ọrụ ọ bụla na-akwalite nnukwu ọrụ ha na-arụ mana ha anaghị ekwukarị ọdịda. Anyị enwetala òkè anyị. Ajụjụ bụzi ihe na-eme ugbu a. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na njigide, ịnwere ike ịkwụ ụgwọ ọzọ na ụlọ ọrụ dị ugbu a ma ọ bụ nke ọhụrụ iji gbalịa nweta ihe ị chọrọ. Anyị na-arụ ọrụ ego dị larịị ka nrụgide wee dịrị anyị ịnapụta. N'ihe kachasị njọ, ndị ahịa anyị makwaara otu anyị si ejedebe nkwa anyị tupu ha abịanye aka (anyị na-eme atụmatụ zuru oke, ịkọ akụkọ, akwụkwọ, na akụ).
Kedu ihe a gụnyere, kedụ ihe mgbakwunye? Ọ na-ewute m site na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ebupụta saịtị ma ọ bụ atụmatụ naanị iji chọpụta na arụghị ọrụ ahụ kachasị maka ọchụchọ ma ọ bụ mkpanaka. Mgbe nsogbu, gị n'ụlọnga zara, “didn't na-arịọ maka na.” Huh? Ọ bụ eziokwu? Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-achọ ndị ahịa gị, ị ga-ekwusi ike na ị na-eme ihe niile iji bulie nsonaazụ azụmaahịa.
Kedu ka anyị si ejikwa ikike nwe? Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ọrụ na-azụ ngalaba, Bochum, isiokwu, ma ọ bụ foto foto… mana onye nwere ha? Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ụlọ ọrụ na-anabataghị ma na-aga na ngalaba gị (ee, ọ ka na-eme). Jide n'aka na ị nwere nkwekọrịta ironclad na ebe ọ bụla nwe gị bụ nke gị. Ọ bụ ya mere anyị ji enwetakarị kaadị akwụmụgwọ n'aka ndị ahịa anyị wee zụta ọrụ na aha ha. Inwe otu adreesị ozi-e ebe ị nwere ike itinye / wepụ ụlọ ọrụ gị bụ ụzọ dị mma iji jikwaa akaụntụ ndị ahụ ebe ị ga-efunahụ ha.
Kedu ngwaọrụ ndị ha na-eji? Ọ bụ ezie na anyị ejirila nzuzo kpọọ ụfọdụ nyiwe maka ndị ahịa anyị, anyị ka na-emeghe ma na-agwa ha eziokwu na ngwaọrụ anyị na-eji. Uru nke ịbụ ụlọ ọrụ bụ na anyị nwere ike ịzụta ikikere ụlọ ọrụ na ngwanrọ anyị ji maka ọtụtụ ndị ahịa. Naanị, ndị ahịa anyị agaghị enwe ike ị nweta ha mana anyị nwere ike ịnye ha ohere. Nke a abụghị naanị na-enye ndị ahịa anyị nghọta banyere uru anyị na-ada, ọ ga-emekwa ka ha hụ n’onwe ha ogo na aha ngwa ọrụ anyị na-eji.
Kedu ụzọ ọzọ ha nwere ike isi nyere gị aka? Na na na - adịghị m mma ruo ugbu a, ka anyị nwee obi ụtọ. Ọ ga-eju gị anya mgbe ụfọdụ n'ụdị onyinye na ọrụ dị iche iche dị n'okpuru eriri gị. Ọ bụ ihe kpatara anyị, mana oge ụfọdụ anyị na-achọpụta onye ahịa anyị dị ugbu a goro ego ọzọ maka ọrụ anyị nwere ike mechaa ha. Ọ dịghị ihe ọzọ na-akụda mmụọ! Gbaa mbọ hụ na gị na ndị ụlọ ọrụ gị na-ekwurịta okwu banyere nnukwu ọrụ ha na-arụ yana ụfọdụ mpaghara ndị ọzọ ha lebara anya ha nwere. Ebe ọ bụ na ị nwere mmekọrịta, ịgbakwunye na ọrụ na ọrụ ndị ọzọ na-adịkarị mfe karịa ịmalite ọhụụ na akụ ọhụrụ.
Anyị kesara ihe ọchị na-atọ ọchị oge ụfọdụ mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta ụlọ ọrụ ahụ abanye. Ma mmegbu ahụ nwere ike ime na njedebe abụọ nke mmekọrịta ọ bụla ma ọ dị oke mkpa na ndị ọrụ gị agaghị emegbu gị. Ọbụghị naanị na atụmatụ gị ga-ata ahụhụ, mana ị nwere ike idafu mmefu ego gị.
Echere m na enwere ike ịchịkọta ihe a n'otu ajụjụ. Ndị ọrụ gị ọ na-arụ ọrụ iji hụ na nsonaazụ azụmaahịa gị ka ọ bụ nke ha? Anyị kwenyere na mgbe ndị ahịa anyị na-erite uru, yabụ anyị mere… nke ahụ bụ ihe kachasị anyị mkpa.
Tags: gị n'ụlọngansogbu ụlọ ọrụajụjụ gị n'ụlọngammekọrịta ụlọ ọrụ
Nọvemba 27, 2014 na 3:16 nke ụtụtụ
Ya mere, ọ bụ 2am Ekele na mba m na-ejibeghị abalị nile emailing ty's ndị niile m na-enwe ekele n'agbanyeghị na m na-eme nke ahụ n'ekpere. M ka na-ehichapụ ozi-e dị ka otu ndị otu nwoke 1 na-ewu ụlọ anaghị akwụ ụgwọ yana webụsaịtị na-atụ anya ịmalite n'isi afọ ọhụrụ a. Ihe m kwuru ebe a Doug bụ ekele ọha na eze, ọkwa ya ugbu a na-egosipụta iguzosi ike n'ezi ihe, ụkpụrụ omume na nghọta nke mbụ dọtara m ọtụtụ afọ mgbe anyị abụọ kwadoro "Obere Indiana" tupu ịrị elu Facebook. Amanye ezumike nká n'oge na mgbake site na nkụchi obi dugara m n'ime isiakwụkwọ ikpeazụ m na Chineke, onye 10 m lara ezumike nká Havanese breeder soulmate, Social Nche na kọmputa na-ebu ihe agbara karịa m pickup. Abụ m onye nkwuwa okwu mana n'oge na-adịghị anya m mụtara eBay agaghị abụ ọrụ ọhụrụ ma ahụmahụ ndụ nyere m mmasị maka eCommerce, dị ka ọzọ na-aga Ụlọ Ahịa Azụmahịa ma soro ndị nwe ụlọ na-arụ ọrụ ma na-ejedebe na naanị onye nwe ya na Indiana. Dị ka ọrụ m ghọrọ agụụ otú ahụ ka mmasị m na nkwanye ùgwù Douglas Karr site na mgbasa ozi mgbasa ozi ya yana blọọgụ ya. Ọ maghị otú ọkachamara ọkachamara ya na-esighị ike ịbịakwute ya dị ka Doug onye ahụ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na onye na-ahụ maka kọmputa zuru oke na-ahụ ụdị mmekọrịta dị otú ahụ na onye Geeker rụzuru nke ọma na nke a na-akwanyere ùgwù, onye ị na-echekarị na ọ bụ enyi na onye ndụmọdụ ogologo ndụ mgbe ị na-achọpụta na okwu ihu na ihu emeela nanị ugboro abụọ n'ime afọ ndị a. Ee, ọ nọ n'anụ ahụ ka m si achọta ya na ntanetị ya na blọọgụ ya na onye mgbasa ozi mgbasa ozi ya mere ịhụ ya ugboro ugboro adịghị mkpa ka obi sie ya ike na ọ bụ ezigbo ihe. Anyị na-ekerịta ọtụtụ mmasị na ihe na-adịghị amasị anyị ma mgbe ụfọdụ enweghị nkwekọrịta n'ihu ọha; (cheta na m na-ekwupụta na-enweghị ihe ọmụma kọmputa nwe nke mere na ọ bụghị a ngosi barometer,) ma anyị okpukpe, omume, na-elekọta mmadụ, omenala na ndọrọ ndọrọ ọchịchị echiche bụ ọtụtụ mgbe chiri anya na-etolite ntụkwasị obi maka ịnakwere ya ọkachamara echiche na nduzi. Ọ bụ Ekele na ọzọ ịhụ nke a nghọta n'ime blog na-ewetara m ịkọrọ a sliver nke onwe ekele na maka gị.